रबि लामिछानेका समर्थक एक चेलीले साउदीबाट , बिदेशमा भएका दिदि बहिनीले लाई यति सम्म भने हेर्नुहोस भिडियो सहित - Taja Report
Homeसमाचाररबि लामिछानेका समर्थक एक चेलीले साउदीबाट , बिदेशमा भएका दिदि बहिनीले लाई यति सम्म भने हेर्नुहोस भिडियो सहित
रबि लामिछानेका समर्थक एक चेलीले साउदीबाट , बिदेशमा भएका दिदि बहिनीले लाई यति सम्म भने हेर्नुहोस भिडियो सहित
July 12, 2018 समाचार Comments Off on रबि लामिछानेका समर्थक एक चेलीले साउदीबाट , बिदेशमा भएका दिदि बहिनीले लाई यति सम्म भने हेर्नुहोस भिडियो सहित
\_रबि लामिछानेका समर्थक एक चेलीले साउदीबाट , बिदेशमा भएका दिदि बहिनीले लाई यति सम्म भने हेर्नुहोस भिडियो सहित अन्त्य सम्म हेर्नु होला
पाँच राशिको खुल्नेछ भाग्य, मालामाल हुने बन्नेछ योग- भोलि यस वर्षकै पहिलो सुर्य ग्रहण लाग्ने !
खगोलशास्त्रीहरूको अनुसार यस वर्षकै पहिलो सुर्य ग्रहण १३ जुलाईको दिन लाग्ने भएको छ। यस सुर्य ग्रहण नेपाल र भारतबाट नदेखिने बताइएको छ। साथै यस सुर्यग्रहण आंशिक हुने पनि बताइएको छ। त्यस दिन हुने सुर्य ग्रहण दक्षिण आस्ट्रेलिया र आसपासका क्षेत्रबाट देख्न सकिने जानकारी आएको छ। सूर्य ग्रहण १३ जुलाई २०१८ को दिन नेपाली समय अनुसार बिहानको ७ बजेर ३३ मिनेटबाट शुरु हुने बताइएको छ। साथै यस सुर्य ग्रहण बिहानकै ८ बजेर २८ मिनेट सम्म रहने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
नेपालमा सुर्य ग्रहणको खासै असर नपर्ने हुँदा राशिहरुमा पनि खासै प्रभाव नपर्ने बताइएको छ। तर पनि केही राशिमा भने केही असर देखा पार्नेछ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार कर्कट, मिथुन अनि सिंह राशिमा भने कहि अशुभ असर पर्ने देखिन्छ। यस कारण ती तिन राशिले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर निम्न उल्लेखित राशिलाई भने अत्याधिक लाभ मिल्ने हुन्छ।
यस राशि हुनेहरुको लागि सुर्य ग्रहण धेरै शुभ रहन सक्ला। चिताएको सपुर्ण कार्य पुरा हुने सम्भावना बढेर जानेछ। प्रियजनसँग भेट-घाटमा रमाउने अवसर मिल्न सक्ला। अचल सम्पत्तिमा भनेको जस्तै लाभ मिल्नेछ। सरकारी कार्यमा पनि सफलता मिल्न सक्ला भने प्रेम सम्बन्धमा पनि नयाँ रुप आउन सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको लागि सुर्य ग्रहणले समय धेरै खास बनाउन सक्ने देखिन्छ। अड्किएको कार्य फेरी शुरु हुन सक्ला। व्यवसायीहरुको लागि पनि समय धेरै शुभ रहनेछ भने विदेश यात्रा सफल हुनेछ। यस राशि हुनेहरुको लागि जमिन सम्बन्धि कार्यमा भनेको जस्तै लाभ मिल्नेछ। सथौ स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि सुर्य ग्रहले सम्पूर्ण दुख हटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जीवनसाथीको हरेक इच्छा पुरा गर्न यस राशिका मानिसहरु सक्षम रहन सक्ने देखिन्छ। साथै यस ग्रहणले जीवनमा धेरै नयाँ परिवर्तनहरू पनि ल्याउन सफल हुन सक्ला। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार आउन सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको लागि सुर्य ग्रहण सबै भन्दा लाभदायक रहने देखिन्छ। ग्रहणका कारण व्यवसायमा अत्याधिक लाभ मिल्न सक्ला भने नयाँ कार्य थालनी गर्न योजन पनि सफल भएर जाने देखिन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुन सक्ला भने मान-सम्मान पनि प्राप्त हुन सक्ला। सन्तान शुख पनि मिल्न सक्ला।
यस राशि हुनेहरुले आफ्नो खर्चमा केही नियन्त्रण राखेमा अन्य क्षेत्र भने धेरै राम्रो साथै लाभदायक रहने देखिन्छ। सरकारी कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। जीवनको विषयमा धेरै शुरुवात हुने देखिन्छ भने परिवारमा भएको सम्पूर्ण समस्या दुर भएर जान सक्ला। भविष्यसँग सम्बन्धित कार्य शुरु हुन सक्ला।
टिपर दुर्घटनामा लोग्ने मारिएपछि,पाँच वर्षीय छोरा लिएर टोलाइरहेकी लीला भन्छिन म रुनु पनि सक्दिन [भिडियो हेर्नुहोस ]
सावधान ! बिर्सेर पनि माछा खाएपछि नपिउनुहोस् दुध, जिन्दगीभर पछुताउनुपर्नेछ